Nzira Yokuchengetedza Bitcoins - Iva Newe Wako Wako Bitcoin Wallet
Kunyange zvazvo zvichikosha kunzwisisa Chii chinonzi Bitcoin, zvinokosha zvakare kuziva nzira yekuchengetedza bitcoins. Kuva neBitcoin chikwama ndiyo nzira chete yekuchengetedza stash yako ye bitcoins. Vanochengetedza zvigadzirwa zvepachena zvaunoda kuti uwane iyo ye Bitcoin address uye kushandisa mari yako. Kune marudzi akasiyana-siyana emabhadharo akagadzirwa nemhando dzakasiyana siyana dzekushandisa, saka usakurumidza kusarudza imwe uye usingazivi nezvemamwe marudzi. Iwe unofanirwa kuongorora zvimwe zvinhu mukusarudza kuti chikwama chipi chinonyatsoenderana newe.
Kana iwe waisa iyo yekutanga Bitcoin mutengi, saka iwe unotova neDesktop chikwama uye iwe hauna kana zano iwe unotoziva kare kuchengetedza mabitcoins. Inoita ese blockchain network kutengeserana senge Bitcoin kero yekutumira uye kugamuchira iyo chaiyo mari uye kuchengetedza yakavanzika kiyi yayo. Icho chakanyanya kukosha ndeye yepakati chikwama. Kune akawanda emamwe desktop mawallet uye iwo akabatana kune kumwe kuchinjana kana imwe. Kune akasiyana desktop desktop wallets ane akasiyana maficha. Multibit inomhanya paWindows, Mac OSX uye Linux. Mukoko iOX-yakavakirwa chikwama iyo ine yayo yega chitoro chinobatanidza zvakananga kune maBitcoin masevhisi. Desktop wallets senge Armory, iyo inoshandisa isingaremer browser browser plug-in yekupa masevhisi ekudzivirira vanhu kubva mukukwanisa kuateedzera, anoitwa kuitira kukwidziridzwa chengetedzo. Mamwe mawallet akaita seWallWallet anotarisisa kusazivikanwa.
Desktop wallets isarudzo yakanaka yekuchengetedza bitcoins, asi chii kana iwe uchifanira kuripa muBitcoin pachitoro chenyama? Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvikwama zvefoni zvinouya zvakanaka. Icho chiri muchimiro chepurogiramu pane foni yako iyo inodzivirira yako Bitcoin mazita 'mashomanana ega uye inokubvumira kubhadhara zvinhu zvaunoda kushandisa foni yako zvakananga. Nhare yako ye-smartphone ye-near-field communication (NFC) inoita kuti iwe ubhadhe ne bitcoins chete nekungoshandisa foni kumunhu anenge achiverenga uye haufaniri kuisa chero ruzivo chero rupi zvacho.
Chimwe chezvinhu zvikuru zvinoshandiswa pamasipireti ndeyekuti hazvisi zvizere zveBitcoin. Kusiyana nevekodhedhi wallets, mobile wallets hazvikwanisi iyo yose Bitcoin blockchain. Mobile chikwereti chinoshandisa panzvimbo yekujekesa kubhadhara (SPV) iyo inongotora chikamu che blockchain chekutengesa.
Muchikwata chemaIndaneti, mapepa ako ega ega akachengetwa paIndaneti Chinhu chikuru chekushandisa kambani yepaIndaneti ndechokuti iwe unogona kuzarura pane chero chigadzirwa. Kusiyana nemapurisa uye zvigadzirwa zvemotokari zvinongokubvumira kuti uchengetedze chikwama mune imwe chigadzirwa, painternet wallet hazvibvi pane imwe chinhu. Iwe unogona kunyange kuzarura pa cafe yeInternet. Dambudziko nemhando iyi yechikwama ndeyokuti iwe uri kupa ruzivo rwezvipfeko zvako zvepachena kune sangano rinoshandisa webhusaiti. Izvo zvine ngozi, kunyanya kana une zvakawanda zve bitcoins zvakachengetwa muchikwama chako. Asi zviitiko zvakadaro zvinogona kudzivirirwa kana iwe ukashandisa vatsigiri vakavimbika vakaita seCoinbase.
Kana iwe uchida kuchengeta huwandu hwakawanda hwe bitcoins asi usingadi kuti munhu wechitatu afambidzwe, unogona kuedza kushandisa hardware chikwama. Zvishoma mumutambo, hardware zvikwata zvishandiso zvinoshandisa magetsi ega ega ehurumende uye kuronga kuripa. Uyezve, hardware zvikwama zvinopa kuchengeteka kusingagumi kana zvasvika pakuchengetedza mari yako yemadhora, iyo inobatsira kune avo vanoda rugare rwakakwana rwepfungwa.
Kune mamwe mibvunzo pamusoro pekuchengetedza bitcoins, inzwa wakasununguka taura nesu uye timu yedu inofara kukubatsira iwe nekunetseka kwako.
Nhema N Yero
100 Mbavha Chikoro
Wildcard Kubhejera Tsvuku
va nembiri yakaipa
Houston All-time Rockets
New York Yese-Nguva Knicks
San Antonio Yese-nguva Spurs
Brooklyn Yese-Nguva Mambure